Lioka 24: 1-53
Lioka 23 Lioka 24
Tsy ato Izy, fa efa nitsangana; tsarovy ny teny izany nataony taminareo, fony Izy mbola tany Galilia, hoe:
Ny Zanak'olona tsy maintsy hatolotra eo an-tànan'ny mpanota ka hohomboana amin'ny hazo fijaliana, ary hitsangana amin'ny andro fahatelo.
Fa Petera nitsangana, dia nihazakazaka nankany amin'ny fasana; ary niondrika izy ka nahita ny lambam-paty mipetraka mitokana; dia lasa nody izy sady gaga noho ny zavatara izay tonga teo.
Ary indreo, nisy roa lahy tamin'ireny nandeha tamin'izany andro izany fa hakany amin'ny vohitra atao hoe Emaosy, tokony ho enim-polo stadioraha any Jerosalema.
Ary hoy Izy taminy: Ahoana izao teny resahinareo ety am-pandehanana izao? Dia nijanona ireo sady nalahelo tarehy.
Ary ny anankiray, izay atao hoe Kleopasy, namaly ka nanao hoe: Hianao irery va no vahiny mitoetra any Jerosalema tsy mba mahalalaizay zavatra tonga tao tamin'izao andro izao?
Fa hoy Izy taminy : Zavatra manao ahoana moa izany? Ary hoy izy roa lahy taminy: Ny amin'i Jesosy avy any Nazareta, mpaminany mahery tamin'ny asa sy ny teny teo anatrehan'Andriamanitra sy ny vahoaka rehetra,
Nefa nantenainay fa Izy no Ilay efa hanavotra ny Isiraely; ary tsy izany ihany, fa androany no andro fahatelo hatr'izany nahatongavan'izany.
Nefa kosa ny vehivavy sasany izay namanay nahavery hevitra anay, fa tany amin'ny fasana maraina koa izy,
Fa ireo nanery azy ka nanao hoe: Mitoera aty aminay; fa efa ho hariva izao, ka lasan-davitra ny andro. Dia niditra hitoetra tao aminy Izy.
Dia niresaka hoe izy: Tsy nangorakoraka va ny fontsika, raha niresaka tamintsika teny an-dàlana Izy ka namoaka ny hevitry ny Soratra Masina tamintsika.
Ary ireo kosa dia nilaza izay efa niseho teny an-dàlana sy ny nahafantarany Azy tamin'ny namakiana ny mofo.
Nefa hoy Jesosy taminy: Nahoana no taitra hianareo? Ary nahoana no miahanahana ny fonareo?
Izahao ny tànako sy ny tongotro, fa Izaho no Izy; tsapao Aho, ka jereo, fa ny matoatoa tsy mba manana nofo sy taolana, tahaka izao ahitanareo Ahy izao.
Ary raha mbola tsy nino ihany izy ireo noho ny hafaliana sady mbola talanjona, dia hoy Jesosy taminy: Manan-kanina aty va hianareo?
Ary dia nomeny tapaky ny hazandrano voatonoIzy.
Ary hoy Izy taminy: Izao no voasoratra, fa Kristy hiaritra ka hitsangana amin'ny maty amin'ny andro fahatelo;
ary mba hotorina amin'ny anarany ny fibebahana sy ny famelan-keloka amin'ny firenena rehetra, manomboka eto Jerosalema .
Ary hianareo no vavolombelon'izany.
Ary izy ireo nitsaoka Azy, dia niverina ho any Jerosalema sady faly indrindra .
Ary teo an-kianjan'ny tempoly isan-andro izy nankalaza an'Andriamanitra.